वीपी प्रतिष्ठानका आन्दोलित समुहद्धारा सिट्ठी जुलुस » PradeshReport.com
होम पेज » समाचार » वीपी प्रतिष्ठानका आन्दोलित समुहद्धारा सिट्ठी जुलुस
मन्त्रालय स्तरबाट उच्चस्तरिय कार्यदल गठन भएपनि कार्यदलले आन्दोलनलाइ तार्किक निष्कर्षमा नपुगेसम्म खबदारी गरिरहने
प्रकाशित : २ श्रावण २०७८ १८:०४
श्रावण ०२, २०७८ – धरान स्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका आन्दोलित संयुक्त संघर्ष समितिले आज सिट्ठी जुलुस निकोलेका छन । समितिले आज दिउँसो प्रतिष्ठानको डेण्टल गेटबाट सुरु भएको जुलुस भानुचौकमा कोण सभामा परिणत भएको थियो ।
सरकारले भर्खरै उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेपनि निष्कर्षमा समस्याको समाधान नभएसम्म आन्दोलन जारि रहले आन्दोलित संघर्ष समितिले जनाएको छ । आन्दोलनलाई हलुका ठानेर सरकारले मन्त्रालयको तर्फबाट २ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो उक्त वार्ता टोलीबाट हाम्रो माँगको सम्बोधन नहुने भएपछि उक्त टोलिसँगको वार्ता अस्विकार गरेपछि आन्दोलन एक महिना पुगेपछि अहिले आएको नयाँ सरकारले अर्को कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदल गठन हुन्छन तर कार्यदलले हामिलाई वार्तामा झारा टार्ने मात्र काम हुने भएकोले अहिलेको कार्यदलसँग पनि विश्वस नरहेकोले आन्दोलन नरोकिएको उनिहरुको भनाइ थियो ।
लामो समय सम्म शान्तिपुर्ण आन्दोलन गर्दा सरकारको तर्फबाट हाम्रो माँगको सुनुवाई नभएकोले बहिरा सरकारलाई जगाउन आज सिट्ठी जुलुस निकालेको उनिहरुको भनाइ थियो । आन्दोलनको सम्बोधन नभए सम्म झरि बादलले रोक्न नसक्ने भन्दै आज भारि वर्षाको बिच आन्दोलित समित छाता ओढेर सिट्ठी जुलुस लिएर निस्केका थिए । प्रतिष्ठानको डेण्टल गेट हुँदै पुतली लाइन र भानुचौकमा परिक्रमा गरि लोकतान्त्रिक चौतारीमा कोण सभा गरिएको थियो । शैक्षिक संस्था तथा स्वास्थ्य संस्थामा पदाधिकारीहरु राजनीतिक नियुक्तिमा स्वार्थ पुर्णरुपमा रोकिनुपर्ने संघर्ष समितिका संयोजक डा. एस.पी रिमालले कोणसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बताए । राजनीतीक नियुक्ति नै भएता पनि मापदण्ड बनाएर विज्ञ समुहको सिफारिस अनुसार पदाधिकारीहरु नियुक्तिको सिस्टम बनाउनुपर्ने माग रहेको उनले बताए । यसै क्रममा उनले थपे उच्चस्तरिय कार्यदल गठन भएतापनि तार्किक निष्कर्षमा नपुगेसम्म आफुहरुले निरन्तर खबदारी गरिरहनेछौँ । वीपी प्रतिष्ठान जस्तो संस्थालाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउने होइन, जनताको उपचार गर्ने, विद्यार्थी बनाउने संस्था हुनुपर्ने उनको दावि थियो ।
आजको सिट्ठी जुलुसलाई ऐकेवद्धता जनाउँदै धरान नागरिक दबाब समुहले पनि जुलुसमा भाग लिएको थियो । भर्खरै गठन भएको उच्चस्तरिय समितिले प्रतिष्ठानको समस्यालाई जरैबाट उखेलेर फाल्नुपर्ने दबाब समुहका संयोजक राजेन्द्र शर्माले बताए । यो समितिले कामचलाउ तरिकाले झारा टार्ने काम गरेको खण्डमा, फितलो छानविन गरेमा धरानबासीहरु आन्दोलन गर्न तयार रहेको पनि संयोजक शर्माले बताए ।
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव डा.बैकुण्ठ आर्यालको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय उच्चस्तरिय कार्यदल गठन गरेको छ । आन्दोलित संघर्ष समितिको माँग बमोजिम गठन गरिएको कार्यदल सोमबार धरान आउने बताइएको छ । गत असार १५ गते प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र आन्दोलित पक्षका प्रतिनिधिविच वार्ता अघि सारिएको थियो । सो वार्ताको क्रममा उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गीरीले मादक पदार्थ सेवन गरेर आएको भन्दै आन्दोलित पक्षले वार्ता वहिष्कार गरेको थियो । उपकुलपतिको मापासे जाँचको माँग गर्दैै आन्दोलित पक्षले नारा जुलुस लगाएका थिए । उपकुलपति गीरीले मापासे जाँच नगराएपछि आन्दोलित पक्षले पदाधिकारी स्तरिय वार्ता नगर्ने भन्दै मन्त्रालय स्तरबाट वार्ताको लागी कार्यदलको माँग गरेका थिए ।
PrevPreviousगद्दार माधव नेपाल ! – खगेन्द्र संग्राैला
Nextप्रधानमन्त्री देउवालाई महन्थ ठाकुरको पनि विश्वासको मतNext